थाहा खबर: अवैध बिटक्वाइनको उत्पादन नेपालमै! दुर्गम गाउँमा प्रहरीले भेट्यो कारखाना
अवैध बिटक्वाइनको उत्पादन नेपालमै! दुर्गम गाउँमा प्रहरीले भेट्यो कारखाना
काठमाडौं : संसारमा सबैभन्दा जटिल प्रविधिमा आधारित, सबैभन्दा महँगो र विकसित देशहरूमा बढी प्रचलनमा रहेको विद्युतीय मुद्रा बिटक्वाइनको उत्पादन पनि विकसित देशमै हुने अनुमान अधिकांशको हुन्छ। तर, नेपालमा प्रतिबन्धित बिटक्वाइनको उत्पादन दोलखाको दुर्गम गाउँ किर्नेटारमा हुने गरेको खुलेको छ। बिटक्वाइनको कारोबार गर्दै आएका प्रशान्तप्रताप शाहले किर्नेटारस्थित खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसनजिकै बिटक्वाइन उत्पादनसमेत गर्ने गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पत्ता लगाएको छ।
शाहलाई गत साता बिटक्वाइन र अन्य विद्युतीय मुद्राको उत्पादन र कारोबार गरेको आरोपमा सिआइबीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनले स्थानीय भीमबहादुर श्रेष्ठको घरमा कोठा भाडामा लिएर बिटक्वाइनको माइनिङ (उत्पादन) गर्दै आएका थिए। बिहीबार सिआइबीले त्यहाँ छापा मारेर उपकरणहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। शाहसँगै अन्य सातजनालाई पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको छ। काठमाडौंको भाटभटेनी घर भएका शाहले अमेरिकाबाट इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेका छन्। उनी गत वर्ष मात्र नेपाल फर्किएका थिए।
शाहले बिटक्वाइनको माइनिङ गर्न हङकङबाट उपकरण आयात गरेका थिए। गत फागुनमा उनले थाई एयरवेजको विमानबाट थाइल्यान्ड हुँदै नेपालमा सामग्री भित्र्याएका हुन्। उनले ल्याएका उपकरणको कार्टनमामा हङकङमा ती मासान खरिद गरिएको र बैंकक हुँदै काठमाडौं ल्याइएको उल्लेख छ।
उनले बिटक्वाइन माइनिङ गर्ने बिटमेन एन्टमाइनर, पावर सप्लाईलगायत १ करोडभन्दा बढी मूल्यका उपकरण भिœयाएका थिए। उनले करिब १ वर्षअघि नै उपकरण आयात गरेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ।
प्रशान्तप्रतापलाई उनका बुबा सन्दीप शाहले दोलखाको किर्नेटारमा कोठा मिलाइदिएका थिए। बिटक्वाइन माइनिङमा ठूलो मात्रामा विद्युत् चाहिने भएकाले स्थानीय जनतालाई दिन बनाइएको आयोजनाको विद्युत् दिलाउन पनि उनले भूमिका खेलेका थिए। सन्दीप केही समयअघि मात्रै खिम्ती आयोजना बनाउने हिमाल पावर लिमिटेडको प्रमुखबाट निवृत्त भएका हुन्।
– बिहीबार सिआइबीको टोलीले किर्नेटारस्थित शाहको कोठाबाट बिटक्वाइन माइनिङ गर्न प्रयोग हुने २६ थान बिटमेन एन्टमाइनर बरामद गरेको छ। यो बिटक्वाइन माइनिङ गर्ने प्रमुख उपकरण हो। त्यस्तै, बिटम्यान पावर सप्लाई १५, इन्टरनेट राउटर १, टेलिफोन सेट १, इन्टरनेट नेटवर्क भिडियो रेकर्डर १, एचपी ल्यापटप एक, नेटवर्क स्विच, पावर सप्लाई बोर्ड, फायर एक्सटिङगुइसर र हाइभोल्टेज पावर सप्लाई तार एक–एक थान र इन्टरनेट केबल २५ वटा बरामद गरेर काठमाडौं ल्याएको छ।
– बिटक्वाइनको माइनिङ भइरहेको अवस्थामा ती सामग्री नियन्त्रणमा लिइएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले बताए। प्रचलित ऐनको बर्खिलाप हुने गरी शाहले उपकरण आयात गरी बिटक्वाइन उत्पादन गरेकाले उनीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सिआइबीले जनाएको छ।
बिटक्वाइन माइनिङ जटिल सूत्रहरू प्रयोग गरी कम्प्युटरबाट गरिने काम हो। संसारको जुनसुकै स्थानबाट पनि यसको उत्पादन गर्न सकिन्छ। बिटक्वाइन माइन गर्न एउटा विशेष प्रोग्राम (सफ्टवेर र हार्डवेयर दुवै) सहितको कम्प्युटर आवश्यक पर्छ। यो एउटा विकेन्द्रित उत्पादन भएकाले संसारका धेरै मानिसले एकैपटक बिटक्वाइन माइन गर्न चाहन्छन्। उनीहरूले एकैपटक जटिल गणितीय सूत्रको समाधान खोज्छन्। हरेक १० सेकेन्डमा एउटा त्यस्तो समस्या समाधान (ब्लक)को प्रयास गर्छन्, जुन कारोबारका डाटाका रूपमा कम्प्युटर सफ्टवेयरको खातामा अभिलेख हुन्छ। यस्तो कार्यलाई क्रिप्टोग्राफिक ह्यास फङ्सन भनिन्छ। यसरी हुने कारोबारको शृंखलालाई ब्लकचेन भनिन्छ। हरेक १० सेकेन्डमा हुने त्यस्तो कारोबारबाट एउटा युनिक कोड निस्कन्छ, जुन संसारभरिका कम्प्युटरप्रणालीबाट निस्कने कोडसँग मिल्दैन। बिटक्वाइन माइन गर्न चाहनेमध्ये एकपटकमा एकजनाले मात्रै त्यो कोडको ब्लक पाउँछ र त्यो कोड अन्य माइनरहरुले स्वीकृत गरेपछि मात्रै त्यो मान्य हुन्छ। खासमा त्यही युनिक कोड नै बिटक्वाइन हो, जुन अनलाइन वालेटमा स्टोर हुन्छ।
पहिलापहिला सामान्य कम्प्युटरको सिपियुबाटै बिटक्वाइन माइन गर्न मिल्थ्यो। तर, बिटक्वाइनको मूल्य नै यो माइन गर्दा लागेको खर्चका आधारमा तय हुने हुँदा अब सिपियुबाट यो माइन गर्न मिल्दैन। बिटक्वाइनको भाउ बढ्दै जाँदा जिपियु माइनिङ, एफपिजीए माइनिङ, एएसआईसी माइनिङ, क्लाउड माइनिङ, पुल माइनिङलगायतका पद्दति विकास भएको छन्। जति धेरै विटक्वाइन माइनिङ हुँदै जाँदा यो माइनिङको सूत्र र उपकरणका लागि चाहिने खर्च पनि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै, बिटक्वाइनको माइनिङ बढ्दै जाँदा माइन हुन लाग्ने समय पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले जति धेरै उपकरण राख्यो त्यति धेरै बिटक्वाइन चाँडै प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले प्रशान्तप्रताप शाहले २६ वटा सिस्टम राखेका हुन्। संसारमा २ करोड १० लाख बिटक्वाइन मात्रै माइनिङ गर्न मिल्छ। त्यसमध्ये दुई तिहाइ माइन भइसकेको अनुमान छ।
– शाहले बिटक्वाइनको माइनिङ गर्न दोलखाको झाँक्रेखोला आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् प्रयोग गरेका थिए। झाँक्रेखोला लघु जलविद्युत् खिम्ती आयोजनाले स्थानीय प्रभावित जनतालाई विद्युतीकरणका लागि स्थापना गरिदिएको हो। यो खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको मातहत रहेको छ। सो आयोजनाबाट ६३० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये सबैभन्दा धेरै प्रशान्तप्रताप शाहले नै प्रयोग गरेको सहकारीका अध्यक्ष नारायणध्वज खड्काले बताए।
– शाहले बिटक्वाइन माइनिङ गर्न पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति होस् भनेर थ्री फेजको लाइन लिएका थिए। बिटक्वाइनको माइनिङ हुनका लागि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने र उच्च गतिको इन्टरनेट आवश्यकता पर्छ। थ्री फेजको लाइन नेपालमा सामान्यतया ठूला उद्योग, भवन आदिले लिन्छन्। गत चैतदेखि माइनिङ सुरु गरेका शाहले हालसम्म २४ हजार युनिट बिजुली खपत गरेको अध्यक्ष खड्काले बताए। उनीसँग साँझको पिक समयमा ८ रुपैयाँ र दिउँसो र रातिको समयमा ५ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल लिइएको उनले बताए। शाहले सहकारीलाई विद्युत् महसुलबापत १ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको खड्काले बताए।
नेकपामा गुटैगुट, सबैभन्दा बलियो अध्यक्ष ओली
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दृश्य÷अदृश्य रूपमा छ नेता वरिपरिका गुट सतहमा देखिएका छन्। त्यसभित्र पनि अन्य उप...